SARM Maka Ọla Abụba | Mee ka Metabolism gị rụọ ọrụ taa
Igwe Nlebara Anya Ostarine MK-2866 10mg 90 Capsules
Lexlọ nyocha Reflex Ibutamoren MK-677 Nutrobal 10mg 90 Capsules
Mpempe akwụkwọ Reflex Lab Cardarine GW-501516 Endurabol 10mg 90 Capsules
Lexlọ nyocha Reflex Stenabolic SR-9009 8mg 90 Capsules
Reflex Labs Intermediate Cutting tojupụtara
Ihe ngosi Labs Andarine S4 25mg 90 Capsules
Igwe Ntughari Ugwu Ejiri Ejiri 60 Capsules
Reflex Labs Mbido Mbelata Stack
S-23 10mg 90 Capsules na-egbuke egbuke
4.7 e dere na 5
Lexlọ nyocha Reflex Advanced Shredding Stack
Mgbe ị na-belata calorie, na-agụta macros gị, na ịkụ mgbatị ahụ anaghị arụ ọrụ, oge eruola ka ị gbanwee usoro ngwọta abụba ndị ọzọ. Ma na ụlọ ọrụ ahụike dị ka ihe juputara na mgbakwunye na ihe ngwọta ọnwụ ndị ọzọ, o siri ike ịmata ụdị ngwaahịa ndị gimmicks na ndị na-arụ ọrụ n'ezie. Nke a bụ ihe ịchọrọ ịma banyere SARM maka ụkọ abụba.
Kedu ihe bụ SARM?
Nhọrọ Androgen Receptor Modulators (SARMs) bụ ezigbo ahịa. Ndị SARM na-enye ihe ngwọta dị irè, na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ nke na-enye gị ohere inweta nsonaazụ gị chọrọ na-etinyeghị ihe ọ bụla na-emerụ ahụ ma ọ bụ na-egbu egbu na ahụ gị.
Kedu ka SARM si dị iche na mgbakwunye mgbakwunye abụba ndị ọzọ
Na SARM, ị nwere mmetụta niile dị ike ị ga-atụ anya site na mgbakwunye, mana ị gaghị echegbu onwe gị gbasara mmetụta ọjọọ na-ebibi ahụ gị. Nke a bụ n'ihi na SARMS ga - eke naanị ndị na - anabata gị (karịa ndị na - anabata ụbụrụ, ndị na - anabata ntutu, na ndị na - anabata anya). Mgbe ọ bụla ị naara ihe iji gbanwee ndị nnabata a, ị na-enwe ihe egwu nke mgbanwe ọnọdụ uche, ntutu isi, na mmetụta ndị ọzọ na-adịghị mma. Mana n'ihi na SARM ndị a na-elekwasị anya naanị na akụkụ ahụ gị, ị na-anwa ịchụpụ maka ọnwụ abụba, ị gaghị emeso nsogbu ndị a. N'adịghị ka ndị steroid na ihe mgbakwunye ndị ọzọ, SARM maka ụfụ abụba agaghị enwe mmetụta na-adịghị mma na ogo testosterone gị.
SARM maka Ọnwụ Abụba Maka Onye Ọ Bụla!
SARM maka oke abụba nwere ike inyere ọtụtụ mmadụ aka ịgba abụba isi ike. Ma ị nọ n ’ịdị arọ ebum n’uche gị ma ọ bụ na ị nọ nso mana ịchọrọ ịda mba karị, ị ga-enwe ike ịchọta ngwaahịa SARM nke na-eme ka oganihu gị kawanye. Ga-ahụ uru dị iche iche dabere na ụdị SARM ị zụrụ. Ọtụtụ n'ime capsules anyị nwere uru ndị ọzọ dị ka mbelata mbufụt, ike obi ka mma, na nwekwuo ntachi obi. Uru ndị a niile na-eduga gị, ahụike, obi ụtọ, nke kacha sie ike. Otu ụzọ SARM si akwalite oke abụba bụ site na ibelata agụụ gị. Y’oburu n’achọ ibu ibu ma nwekwa uru, ,lọ Ahịa Sarms na-enye ụfọdụ capsules na-eme ha abụọ!
Otu SARM si enyere aka
Capsules ndị a ga-eme ka mgbatị mgbatị gị dị irè karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ị rutela ebe ị naghịzi ahụ nsonaazụ, ọ bụ oge ịnwale SARM. Put na-etinye obere mgbalị iji nweta ọbụna nsonaazụ kacha mma. Gaghị ebuli elu na-enweghị awụfu abụba ahụ. SARM bụ ụzọ aga!
Chọgharịa nhọrọ anyị nke SARMs ngwọta maka oke abụba iji nweta ahụ ịchọrọ mgbe niile! N'ikpeazụ, enwere otu azịza dị mfe maka ebumnuche anụ ahụ gị niile, ma ha bụ maka ịrụ ọrụ, ọdịdị gị, ụdị ndụ gị, ma ọ bụ ihe niile dị n'elu. Ga-ahụ ọtụtụ ụdị capsules dị iche iche iji lebara mkpa gị nke oke abụba.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu karịa ihe dị na weebụsaịtị anyị, gaa na Storelọ Ahịa Sarms! Ọ ga-amasị anyị ịza ajụjụ gị ma nyere gị aka ịchọta SARM zuru oke maka ụfụ ọnwụ nke ga-abara gị uru karịa.